Indlu yabucala iBaglio del Picchio enepiscina
Lenzevacche, Sicilia, Italy
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRoberto
Indawo yoxolo ejikelezwe buhlaza obuziikhilomitha nje ezi-6 ukusuka kumbindi weNoto kunye nemizuzu engama-20 ukusuka kumanxweme amahle eVal di Noto: iBaglio del Picchio inesihlomelo esihle esiyinxalenye yendlu yasefama endala enedama lokuqubha, esandula ukulungiswa ngokupheleleyo. kwaye ixhotyiswe ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo zendlu yanamhlanje, apho abanini bahlala khona ngokusisigxina, iindwendwe ezibelana nabo ngeendawo zangaphandle.
Ibekwe kuphela kumgama weekhilomitha ezimbalwa ukusuka eNoto, eSan Corrado Fuori le Mura kwimeko entle ye "Valle dei Miracoli", indawo yokuhlala inegumbi lokuhlala elinebhedi yesofa etofotofo kunye nekhitshi eneketile, umatshini wekofu kunye nesixhobo esiphathwayo. i-induction hob kwisidlo sakusasa; Ukutya okupheleleyo, ikhitshi langaphandle elinesitovu esiphathwayo sokungeniswa linokusetyenziswa, kunye nazo zonke izixhobo zokupheka ezifumaneka kwiindwendwe. Igumbi lokulala kumgangatho we-mezzanine ligqibezela ngaphakathi, liza nebhedi yobukhulu bokumkanikazi kwaye iphuculwe yimiqadi eveziweyo. Ngaphezu koko, isihlomelo siza negumbi lokuhlambela elisebenzayo elineshawa.
Ngaphandle, iindwendwe zinokonwabela igadi echumileyo enechibi kunye neshawari yangaphandle, ipatio kunye nendawo yebarbecue apho ukupheka isidlo esimnandi kwindawo evulekileyo, ukongeza kwindawo yokuphumla ene-hammock kunye netafile encinci yokuphola ngelixa ufunda. incwadi emthunzini wemithi yomnquma.
Iindwendwe ziya kuba nalo naluphi na uhlobo lwentuthuzelo ezifumanekayo, ezifana nekiti yoncedo lokuqala, iitawuli kunye neetawuli ze-pool, ii-headphones zeTV kunye nezithethi zebluetooth.
Indlu inendawo yokupaka yangaphakathi enokucupha ividiyo.
Indawo ilungiselelwe kakuhle kakhulu kwaye ayikude kakhulu iilwandle zaseLido di Noto kufuneka zifunyanwe, ukongeza kwindawo yogcino lwendalo yaseVendicari kunye nesikhululo seenqwelomoya saseFontanarossa saseCatania (malunga neekhilomitha ezingama-90): yeyona ndawo igqibeleleyo hayi nje kuphela. ukuphonononga isixeko esihle saseNoto, kodwa kunye nokujikeleza kwaye ufumane iindawo ezintle zaseMpuma Sicily.
*Sisonke kwiholide ekhuselekileyo.
Kulo nyaka sibeka ukhuseleko kuqala, kunye nokuqinisekisa impilo-ntle yakho esiyidalile KUNYE, i-Italiya emangalisayo yeMpilo yokuHamba, isicwangciso sethu sokusebenza sempilo yeendwendwe zethu kunye nabasebenzi. Sifuna nabani na onxibelelana ne-Italian emangalisayo ukuba ayenze ngokukhuselekileyo. Emakhayeni ethu uya kufumana iholide epholileyo, epholileyo.
Sikwanikezela kwiindwendwe zethu amava okwenene okuphila njengendawo yasekhaya. Ukuba unomdla, ndwendwela iwebhusayithi yethu ngokumangalisayo okanye uqhagamshelane nathi kwaye siya konwaba ngakumbi ukukunceda uyile iholide ongasayi kulibaleka ukuze ufumane iinzwakazi zase-Italiya.
Isetyenziswa nangabanye iyadi engasemva – Ibiyelwe yonke
Ikwabizwa ngokuba ""ikomkhulu leBaroque"; Iziko lembali likaNoto labhengezwa njengeNdawo yeLifa leMveli yiUNESCO ngo-2002. Phakathi kwezinto ezikhuselweyo ungafumana iCathedral yaseNoto, eyona ndawo ibalulekileyo yokunqula yamaKatolika esixekweni. Kwakhona embindini, iPalazzo Ducezio ayifanele iphoswe, igugu lokwenyani lolwakhiwo lwe-baroque oluhlala eSala degli Specchi ("Iholo yeMirror"). Ngaselunxwemeni kukho indawo echumileyo yendalo yaseCalamosche Beach, eyabhengezwa ngowama-2005 “njengolona lwandle luhle e-Italiya” ngenxa yamanzi acwengileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Roberto
I-Italiya emangalisayo, ububele obugqwesileyo kunye namava enyani kweyona ndawo inomtsalane e-Italiya!
Siza kukunyamekela ukusuka kumavili ukuya phantsi ukuya phezulu.Ukuba unqwenela, besiya kukubonelela ngeengcebiso malunga neyona ndawo ibalaseleyo yokubona isixeko, iindawo zokutyela kunye nokusela, kunye nemisitho esibonelela ngayo isixeko sethu ngexesha lokuhlala kwakho!
Siza kukunyamekela ukusuka kumavili ukuya phantsi ukuya phezulu.Ukuba un…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$228